musha / zvishongedzo / Bathroom accessories / WOWOW Hapana Drill Chimbuzi Pepa Mubati Akakwesha Nickel
Iyi yemapepa emuchimbuzi inobata imwe roll yakachengetwa mufashoni uye yakagadzirira kushandisa.
Iyo disenser yakananga kuisa pamakabati kana pamadziro uye ndiyo yakanakisa yemakamuri madiki ekugezera, hafu yekugezera, uye makamuri eupfu. Vaenzi vanoziva chaizvo kwavanowana imba yekugezesa turu yekugezesa. Ruoko rwakavhurika runoita kuti zvisaite kukurumidza kutsiva mupumburu.
imba yechimbuzi mapepa ekugovera 4010001 nhoroondo:
Yakasimba & yakachengeteka - ese masimbi esimbi zvivakwa, kuverengera hupenyu hwakareba hwebasa. Rounded kona dhizaini, yakachengeteka kuti vana vashandise.
Tsananguro yekutsigirwa - iri pepa remuchimbuzi rugwaro runopihwa neakawandisa 3m maviri-mativi ekunamatira. Iyo inoshandiswa kana mapepa mapepa emachira akaiswa kuti akonzere kufamba kana kutsvedza
Inoshanda zvine simba - nyore uye nerupo dhizaini Inogamuchirwa kune yako yekugezera, yekubikira, yekugezera, yekugezera, rv, yekushanyira mota, musasa, inogona kubata tauro, pepanhau, nezvimwe.
Hunhu - echizvino uye yakapusa kutaridzika, inowirirana akawanda mapepa mapepa masero, ruoko rune simba rwakareba 5-inch.
3m inozvinamatira -mbambo - inokurumidza uye yakapusa kumisikidza. Kusimba kwakasimba uye kusapinda kwemvura. Hapana maburi ekuboora anodiwa. Bvisa zviri nyore pasina kana musara wakasara. Unogona kubata huchenjeri kana iwe ukazoda rubatsiro rwekumisikidza.
SKU: 4010001 Categories: zvishongedzo, Bathroom accessories Tags: Pombi, nickel, Wall Walled
WOWOW Bronze Goridhe Towel Mhete